Jamal Khashoggi: Eeedda dilka wariyaha uu Turkiga u soo jeediyey Sacuudiga 'waa mid aan waxba ka jirin' - BBC News Somali
Jamal Khashoggi: Eeedda dilka wariyaha uu Turkiga u soo jeediyey Sacuudiga 'waa mid aan waxba ka jirin'
Muuqaal muujinaya Jamal Khashoggi oo sii galaya qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul
Sacuudi carabiya oo eedda ku saabsan dilka wariye Jamal Kashoggi ee la sheegay in lagu dilay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku tilmaantay 'been abuur aan sal iyo baar toona lahayn'.
Sacuudi Carabiya ayaa waxay wariyahan la la'yahay u yaqaannaan inuu yahay nin si weyn u cambaareeya siyaasadda Sacuudiga isaga oo waddanka Sacuudiga isaga tagay oo mudda sanad ahna ku noolaa dalkaasi Mareykanka.
Wasaaradda arrimaha gudaha Sacuudiga waxay maanta oo Sabti ah war qoraal ah oo ay soo saartay ay ku sheegtay boqortooyadu iney dooneyso 'runta oo dhan' iney soo bandhigto, iyada oo wakaaladda wararka ee sacuudiga ay wax ka qortay "in amar lagu bixiyey dilka wariyaha", boqortooyadana ay hadalkaasi ku tilmaantay "mid aan waxba ka jirin".
Sacuudi Carabiya oo dhimaysa mishaarka shaqaalaha dowladda
Xoghayaha guud ee qaramada Midoobay Antonio Gutares ayaa sheegay "in si degdeg ah runta shaaca looga qaado, oo wariyaha mucaaradka ee Sacuudiga u dhashay ee la la'yahay ay ka mid tahay dhacdooyinka bariyahan dambe dunida ku soo badanaya lana caadeystay beesha caalamkana ay u dul qaadaneyn arrimaha noocan ah."
"Waxaana lagama maarmaan ah ayuu yiri in si degdeg xaqiiqda iyo sida ay wax u dhaceen shaaca looga qado."
BBC carabi oo soo xigatay qaar ka mid ah Saraakiisha sirdoonka Turkiga ayaa waxay sheegtay iney Turkidu hayaan codad iyo muuqaallo arrintan ku saabsan balse ay xaqiijin karin iney daawadeen ama ay dhageysteen mas'uuliyiinta sare ee Turkiga.
Maxaad ka ogtahay Jamal Kashoggi
Image caption Koox dambibaadhayaal ah oo ka socda dalka sacuudiga oo jimcihi Turkiga soo gaadhay
Imaashaha kooxda dambi baadhayaasha ayaa waxay ku soo beegantay xilli uu mas'uul sare oo ka tirsan boqortooyada sacuudi carabiya Amiir Khaled al-Faisal oo booqday Turkiga uu sheegay iney arrintan xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal dal xumeyneyso xal degdeg ah laga gaaro.